Mahatsiaro An’i Mahasweta Devi, Ilay Mpanoratra Indiana Sady Mpikatroka Ny Zon’ny Foko · Global Voices teny Malagasy
Mahatsiaro An'i Mahasweta Devi, Ilay Mpanoratra Indiana Sady Mpikatroka Ny Zon'ny Foko
Voadika ny 04 Aogositra 2016 4:54 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, عربي, नेपाली, Español, English
Pikantsary avy amin'ny antsafa nataon'i Mahasweta Devi tamin'i Rajiv Mehrotra
Nodimandry teo amin'ny faha 90 taonany ny Alakamisy, 28 Jolay 2016 teo tao Kolkata ilay mpanoratra malaza Indiana Bengali sady mpikatroka ara-tsosialy Mahasweta Devi. Vadin'ny iray amin'ireo mpanoratra tantara Bengali mafana fo indrindra sady fanta-daza amin'ny haisoratra antsoina hoe Bijon Bhattacharya izy.
Teraka tao anatin'ny taona nisafotofoto nandritra ny fanjanahana Britanika tao India i Mahasweta Devi ary nihalehibe tao anatin'ny fianakaviana mpanakanto sy poety ary mpikatroka ara-tsosialy izay nitarika ny hetsika literatiora Bengal (Kallol) tamin'izany fotoana izany.
Voahodidina sy voasariky ny hevitra komonista ny fiainany manontolo, nanomboka niasa tamin'ny asa fanaovan- gazety izy taorian'ny fahaleovantenan'i India , ary taty aoriana lasa mpiaro ny zo ara-tsivilin'ny foko vazimba teratany .
Namoaka ny tantara nosoratany voalohany mitondra ny lohateny hoe Jhansir Rani izy tamin'ny taona 1956. Ny asa fanatsarana ny fiainan'ireo fiaraha-monina Kheria Sabar no tena nahafantarana azy.
Vehivavy niaraka tamin'ny torotoro ary nandà tsy hiaraka amin'ny ‘mahery’ ! Nodimandry tao Kolkata ilay mpanoratra Mahasweta Devi. Fiainana koa izany!!!!
Izy no iray amin'ireo mpanorina ny Vondron'Asa Fanitsiana sy ny Fampahafantarana Ny Zon'ny Vondrom-poko, izay miely hatrany Bengal, Gujarat ka hatrany Maharastra ny asany.
Nizara ny zavatra niainany tamin'i Mahasweta Devii i Ganesh N. Devy tao amin'ny seminera iray tamin'ny 2004 momba ny ‘Fanomezam-boninahitra ny vehivavy: fivoriana momba ireo vehivavy miavaka’.
Hitako izao fa tsy nanilikilika na iza na iza izy, indrindra fa ireo mpanankarena, minisitra, mpanao gazety mpihatsaravelatsihy ary indrindra ireo mpilokaloka. […] Niresaka momba ny fanalefahan-tsazy sivilin'ireo adivasis izy, hoe nahoana ny fomba nandravan'ny fiaraha-monina tsy amperitreretana ny kolontsainan'ny kaontinanta lehibe, ary nahoana ireo tsy manan-tsiny no nampijalina. Nilaza momba ny Lalàna nalaza ratsy nampahafantarina tamin'ny 1871 koa izy izay momba ny Fanamelohana ireo Foko , ny dingan'ny fanitsiana natao tamin'ny 1952 sy ny fitarainan'ireo vondrom-piarahamonina mpifindrafindra monina ao India hatramin'izay.
Dopdi, tantara fohy
Vehivavy manana anjara fototra ao amin'ny tantara poetika haindò antsoina hoe Mahabharata i Draupadi izay nanaon'ny vadiny Yudhisthir azy ho loka fanamby rehefa resy tamin'ny zavatra hafa rehetra izy ary resy tanteraka avy eo rehefa nandeha ny loka namoizany an'i Draupadi .
Notaritaritin'ny mpifanandrina an-keriny nikasa hampitanjaka azy ho eny amin'ny kianja izy avy eo .
Na izany aza, rehefa nitalaho mangina tamin'i Krishna (andriamanitra haindò lehibe) i Draupadi, dia nanampy azy tamin'ny famatsiana lamba Sari tsy manam-pahataperana izy ka tsy vitan'ireo fahavalo ny nanala izany taminy, ary nahavonjy an'i Draupadi tamin'ny fanalambaraka ampahibemaso izany.
Draupadi nosoratan'i Mahasweta Devi – mbola mamparikoditra foana, rehefa mahatsiaro ireo vehivavy adivasi naolana sy novonoina …
Raha sainina indray ilay tantara, nanova ny mpilalao fototra Draupadi ho Dopdi Mejhen, vehivavy avy amin'ny foko i Mahasweta Devi, .
Nahavita nampitanjaka ilay mahery fo ireo lehilahy ao anatin'ilay tantarany .
Tsy manasongadina fotsiny ihany ny fomba samy hafa hitondrana ny vehivavy manodidina ny rafitra ara-tsaranga sosialy ny fahasahian'i Devi mampiseho ny zava-manjo ny vehivavin'ny foko, fa ny mahazo ireo vehivavy iray manontolo eto amin'izao tontolo izao ihany koa.
Na nampitanjahana aza i Dopdi dia mbola nijoro hatrany ho mariky ny hery izy.
Nampiseho ny fitanjahany teo anatrehan'i Senanayak i Draupadi rehefa nandrovitra ny vorodamba natorak'izy ireo tany aminy ary nanipy izany:
Nanatona akaiky kokoa i Draupadi. Nijoro sady nitehi-kiho, nihomehy ary niteny hoe: ity ny zavatra izay karohanareo, Dopdi Mejhen. Mangataka azy ireo hanao ahy ianao, tsy tianao ve ny hahita ny fomba hanaovan'izy ireo ahy?
Noho izany, araka ny fandikana ny tantara amin'ny teny Anglisy nataon'i Gayatri C. Spivak, nandositra ny fanalam-baraka i Dopdi tamin'ny fandavany hanao ny fitafiany indray rehefa avy nampitanjahana ary namadika ny henatra ho any amin'i Senanayak.
Naharitra roapolo taona mahery ny asan'i Mahasweta Devi, ary namokatra literatiora maro tsy mety lany andro nateraky ny famindram-pony ho an'ny mpiray tanindrazana aminy izy.
Tsy iadian-kevitra ny satany manana aingam-panahy ho an'ny taranaka mpanoratra Indiana mbola ho avy.
Fiaraha-miory ho an'ilay mpanoratra farany
Nizara ny alahelony tao amin'ny Twitter ireo mpanao gazety sy ireo mpanoratra, niaraka tamin'ireo fikambanana literatiora malaza maro .
” Hazaar churasir Ma ” – Mila mamaky ny tantaran'ilay mahery #MahaswetaDevi i ” Draupadi “.Mandria am-piadanana
Ny vanim-potoan'ny avara-pianarana misahana ny vahoaka no niarahana taminy ary nijoro tao anatin'ny fanilikilihana sy ny fampahoriana izy ary nanome azy ireo fitenenana. Tantara velona Mandria am-piadanana #MahaSwetaDevi
Tonga ny mpanoratra ary lasa avy eo saingy tsy hisy intsony ny tahaka an'i Mahasweta Devi . Mpanoratra lehibe, mpikatroka lehibe, olombelona miavaka.
Mandria am-piadanana Mahasweta Devi . Fahalasanana mampalahelo ho an'ny literatiora. Mpanoratra lehibe sy mpikatroka miavaka ; vehivavy mafana fo sy malala-tanana.